Isikhathi Esihle Sokuvakashela eJapan
I-SIM Card vs Pocket Wifi
Isikhathi saseJapan manje
I-Emperor & Ifulegi
Ukuzamazama Komhlaba Nezintaba-mlilo
ukuthuthwa kwabantu ngenxa yengozi
Izindawo ezihlobene neJapan
Imvelo isifundisa "uMujo"
Isimo sezulu saseTokyo
Isimo sezulu i-Osaka
Isimo sezulu Hokkaido
Igqoke Ubusika eJapan
Gqoka Ubusika eHokkaido
I-Spring Wear eJapan
Izingubo zasehlobo eJapan
I-Autumn Wear eJapan
Izithombe: Umshado waseJapan
Izithombe: bamboo Isiko
Izithombe: Isibani esikhanyayo eJapan
Izithombe: Izimoto ze-Kei
Ama-Itineraries amahle kakhulu
Ukuzamazama komhlaba kweTohoku
Izithombe: Ulwandle Inland
I-Shinkansen (isitimela esinezinhlamvu)
Isikhumulo Sezindiza Esisha
Isikhumulo sezindiza saseNarita
Isikhumulo sezindiza saseHaneda
Isikhumulo sezindiza i-Kansai
Izinkathi Ezimangalisayo, Ukuphila Namasiko
Chofoza edolobheni, esifundeni, noma esifundeni ukubuka i-athikili. Uma ungakwazi uchofoze kumephu, sicela uchofoze inkinobho engezansi bese ukhetha idolobha, isifunda noma isifunda ofuna ukusibona.
Izifunda kanye nezifunda
I-Gunma Tochigi Ibaraki
UNigata Toyama Ishikawa
Fukui Nagano I-Gifu
I-Hyogo Nara Wakayama
I-Tokushima Kagawa Ehime
Ama ifotho Kyoto
Izithombe: Ithempeli laseKiyomizudera eKyoto
Izindawo eziheha izivakashi ezidume kakhulu e-Kyoto yiFushimi Inari Shrine Shrine, Kinkakuji Temple kanye neKiyomizudera Temple. Ithempeli laseKiyomizudera lisemithambekeni yentaba engxenyeni esempumalanga yedolobha laseKyoto, futhi umbono ovela ehholo elikhulu, elingamamitha angu-18 ukuphakama, uyamangaza. Masingene ohambweni lwangempela lokuya eThempelini laseKiyomizudera! Izithombe zeThempeli laseKiyomizudera e-Kyoto Ithempeli laseKiyomizudera e-Kyoto = Ithempeli leShutterstock Kiyomizudera e-Kyoto = IThempeli le-Shutterstock Kiyomizudera e-Kyoto = IThempeli le-Shutterstock Kiyomizudera e-Kyoto = IThempeli le-Shutterstock Kiyomizudera e-Kyoto = I-Shutterstock Kiyomizudera Ithempeli e-Kyoto = Ithempeli leShutterstock I-Kyoto e Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera Temple in Kyoto = Shutterstock Map of Kiyomizudera Temple [ikheli lemephu = "Kiyomizudera Temple" width="100%" height="353px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme-="screet-"screet" class="screet" imephu yomngcele dp-map-centered" zoom="12" draggable="true" controls="true"] Ngiyabonga ngokufunda kuze kube sekugcineni. Buyela ku-"Best of Kyoto"Okuthunyelwe okuhlobene: Izithombe: Ithempeli laseKodaiji eKyoto Izithombe: Ithempeli laseNanzenji eKyoto Izithombe: Umlingo Wethempeli laseRurikoin eKyoto Izithombe: Imibala ekwindla eThempelini laseTofukuji, Izithombe zeKyoto: Ithempeli laseDaitokuji eKyoto -Izwe Lomhlaba kaZen eHarmony neNature Kyoto ! 26 Izikhangibavakashi ezihamba phambili: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji njll Izithombe: Eikando Zenrin-ji Temple -The temple with the most beautiful autumn imibala Izithombe: Kyoto Imperial Palace (Kyoto Gosho) Izithombe: I-Kyoto Yesiko e-Summer Photos: Cherry blossoms in Kyoto Izithombe: UMfula iKamogawa eKyoto Izithombe: Amaqabunga ekwindla eKyoto
Ama ifotho Izindawo zeqhwa
Izithombe: Imizana embozwe yiqhwa eJapan
Ngingathanda ukwabelana nawe ngemvelo yamadolobhana aseJapane aneqhwa. Lezi izithombe ze-Shirakawa-go, Gokayama, Miyama kanye no-Ouchi-juku. Ngolunye usuku, uzojabulela umhlaba omsulwa kula madolobhana! Izithombe zemizi embozwe yiqhwa Shirakawago (Gifu Prefecture) Shirakawago, Gifu Prefecture Shirakawago, Gifu Prefecture Shirakawago, Gifu Prefecture Map of Shirakawago [imephu address="Shirakawago" width="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87b8bp8bp3b4AqAwl" the =" discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" controls="true"] Gokayama (Toyama Prefecture) Gokayama, Toyama Prefecture Gokayama, Toyama Prefecture Map ye-Gokayama [ikheli lemephu = "Gokayama" width="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zo " draggable="true" controls="true"] Miyama (Kyoto Prefecture) Miyama, Kyoto Prefecture Miyama, Kyoto Prefecture Imephu Miyama [ikheli lemephu="Miyama, Kyoto" wide="8%" height="100px" api= "AIzaSyDvB500bpqAqs_d87wlvYARF8obRvaO8PEN3" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="4" draggable="true" controls="true"] Ouchi-juku (Fu kushima Prefecture) Ouchi-juku, Fukushima Prefecture Ouchi-juku, Fukushima Prefecture Map of Ouchi-juku [map address="Ouchijuku, Fukushima" wide="8%" height="100px" api="AIzaSyDvB500bpqAqs_d87wlv8bcree"8PE3oRF4oRF8o class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12" draggable="true" controls="true"] Okufanele ugqoke uma uvakashele amadolobhana aneqhwa Ngiyabonga ngokufunda kuze kube sekugcineni. Emuva "Ezindaweni Zeqhwa" Okuthunyelwe okuhlobene: Izithombe: Intaba iFuji embozwe yiqhwa Izindawo ezingu-60 Ezihamba phambili Zeqhwa eJapane: Shirakawago, Jigokudani, Niseko, Sapporo snow festival ... Izithombe: K-cars in Japan Photos: Sakura- Cherry blossoms in Izithombe ZaseJapan: I-Miharu Takizakura -Isihlahla samatsheri esingcono kakhulu e-Japan! Izithombe: ISan'in -Izwe elingaqondakali lapho kuhlala khona iJapan yakudala! Izithombe: I-Nara -Inhloko-dolobha yasendulo yase-Japan Siyakwamukela e-Japan! Jabulela izithombe ezinhle ezingu-XNUMX! Izithombe: Izinkathi ezine zeKamikochi Izithombe: Odaiba e-Tokyo Bay Izithombe: Izithombe ze-Hakodate: I-Ise Jingu Shrine ...
Ama ifotho I-Hokkaido
Izithombe: Biei noFurano ehlobo
Izindawo ezithandwa kakhulu yizivakashi eHokkaido ehlobo yi-Biei neFurano. Lezi zindawo, ezimaphakathi neHokkaido, zinamathafa amabi. Izimbali ezimibalabala ziyaqhakaza lapho. Ukubona ukuguquka kwemvelo kuleli thafa kuzophulukisa ingqondo yakho. Mayelana noBiei noFurano, sengizibhalile izindatshana ezithile. Kodwa-ke, ngingathanda ukwethula ubuhle bedlelo lasehlobo ngaphezulu, ngakho ngizofingqa isici sesithombe lapha. Sicela ubhekisele ezihlokweni ezilandelayo ezikhuluma ngo-Biei noFurano. Umhlaba omuhle ehlobo Ukuphuma kwelanga e-Biei, Hokkaido, Japan = Adobestock Izimbali ezinhle ipulazi egqumeni elimibalabala e-Biei, Hokkaido, japan = Shutterstock African Marigold, Salvia splendens blossos in the rainbow flowers in the famous and beautiful Panoramic Flower Gardens Shikisai-no-oka at Hokkaido , Japan = Shutterstock Lavendar, scarlet sage blossom of Sunrise Park, Furano, Hokkaido, Japan = Shutterstock Owesifazane Omi ELavender Field eTomita Farm, Furano, Hokkaido, Japan = Shutterstock Eminye imibono emihle e-Biei naseFurano Igquma elihle lase-Biei- cho, Hokkaido = Adobe Stock Ken & Mary tree, indawo edumile e Biei-cho, Hokkaido Japan = Shutterstock Sunflower blossom in Hokusei no Oka Tenbo Park eHokkaido, Japan = Shutterstock blue pond of bieishirogane town = Shutterstock blue pond of bieishirogane town = I-AdobeStock Evening in Hokkaido Evening landscape. Biei Hokkaido, Japan = Shutterstock sunset in Biei, Hokkaido, Japan = Shutterstock Lihle ukushona kwelanga e Biei, Hokkaido, Japan = Shutterstock Maps Biei [ikheli lemephu="Biei, Hokkaido" width="100%" height="300px" api=" AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" controls="true"] Furano [ikheli lemephu="Fudorano" . ..
Izithombe: iGeisha (Maiko & Geigi) eGion, eKyoto
I-Japan isenayo isiko le-"geisha". AmaGeisha abesifazane abajabulisa izihambeli zabo ngenhliziyo yonke ngemidanso nezingoma zesiJapane. I-Geisha ihluke ngokuphelele ku-courtesan "Oiran" eyayikhona ngesikhathi se-Edo. E-Kyoto, i-geisha ibizwa ngokuthi "geigi". I-Geisha encane engumfundi ibizwa ngokuthi "maiko". Muva nje, abesifazane abasebenzele inkampani bangase babe i-geisha. Ngaphambilini, ngike ngaxoxisana ne-geisha izikhathi ezimbalwa. Bafunde ukuziphatha okukhaliphile nokuthambile futhi bangabalandeli ababalulekile besiko lendabuko. E-Kyoto, imicimbi ibanjwa entwasahlobo nasekwindla lapho ungabuka khona umdanso we-geisha. I-Geisha iphinde ibambe iqhaza elibonakalayo kuMkhosi we-Gion ngoJulayi. Sicela uzame isiko le-geisha! Izithombe zikaGion Izithombe zikaGion = Izithombe zeShutterstock zikaGion = Izithombe zeShutterstock zikaGion = Izithombe zeShutterstock zikaGion = Izithombe zeShutterstock zikaGion = Izithombe zeShutterstock zikaGion = Izithombe zeShutterstock zikaGion = Izithombe zeShutterstock zikaGion = Izithombe zeShutterstock zikaGion = Imephu yeShutterstock ye Gion [ikheli lemephu = "Gion, Kyoto" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12 " draggable="true" controls="true"] Ngiyabonga ngokufunda kuze kube sekugcineni. Buyela ku-"Best of Kyoto" Okuthunyelwe okuhlobene: Izithombe: I-Kyoto Imperial Palace (Kyoto Gosho) Izithombe: I-Kyoto Yendabuko Ehlobo Izithombe: Ithempeli lase-Kodaiji e-Kyoto Izithombe: I-Cherry iqhakaza e-Kyoto Izithombe: Ithempeli lase-Kiyomizudera e-Kyoto Izithombe: Umfula i-Kamogawa e-Kyoto : Umkhosi weJidai Matsuri e-Kyoto Izithombe: Ukukhanya okumangalisayo "Hanatouro" e-Arashiyama, Kyoto Photos: ...
Izithombe: Kinkakuji vs Ginkakuji -Which uyintandokazi yakho?
Yikuphi okuthanda kangcono, i-Kinkakuji noma i-Ginkakuji? Kuleli khasi, ake ngethule izithombe ezinhle zala mathempeli amabili amele i-Kyoto. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana ne-Kinkakuji ne-Ginkakuji, sicela ubheke izindatshana ezingezansi. Izithombe zeThempeli le-Kinkakuji ne-Ginkakuji Ginkakuji e-Kyoto, e-Japan = Ithempeli le-Shutterstock Kinkakuji e-Kyoto, e-Japan = Ithempeli le-Shutterstock Ginkakuji e-Kyoto, e-Japan = Ithempeli le-Shutterstock Ginkakuji e-Kyoto, e-Japan = Ithempeli le-Shutterstock Kinkakuji e-Kyoto, e-Japan = Ithempeli le-Shutterstock Ginkakuji e-Kyoto, Japan = Shutterstock Kinkakuji Temple e Kyoto, Japan = Shutterstock Ginkakuji Temple e Kyoto, Japan = AdobeStock Kinkakuji Temple e Kyoto, Japan = Shutterstock Map of Kinkakuji [imephu ikheli="Kinkakuji" width="100%" height="300px" api= "AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12" draggable="true" controls="true"] Imephu ye-Ginkakuji [ikheli lemephu" wide="Ginkakuji" = "100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="12" draggable="true" controls="true" controls="true" ] Ngiyabonga ngokufunda kwakho kuze kube sekugcineni. Buyela ku-"Best of Kyoto"Okuthunyelwe okuhlobene: Izithombe: Ithempeli laseKodaiji eKyoto Izithombe: Imigwaqo esemagqumeni eyingqophamlando eKyoto -Sannei-zaka, Ninei-zaka, njll. Izithombe: Umkhosi weJidai Matsuri eKyoto Izithombe: Izimbali zeCherry eKyoto Izithombe: I-Kyoto Imperial Palace (iKyoto Gosho) Izithombe: Kifune, Kurama, Ohara ebusika -Uzulazula enyakatho yeKyoto Kyoto! 26 Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji njll Izithombe: Nara -Inhlokodolobha yasendulo yaseJapan Izithombe: iGeisha (Maiko & Geigi) eGion, Izithombe zeKyoto: I-Kyoto Yesiko ezithombeni Zasehlobo: Imizana embozwe yiqhwa eJapan Izithombe: Koyasan
I-Hakodate eningizimu ye-Hokkaido imbozwe yiqhwa kusukela ngoJanuwari kuya ku-March.I-Hakodate ngalesi sikhathi yinhle ngempela.Isitsha selayisi sezilwane zasolwandle emakethe ebizwa ngokuthi i-Asaichi nayo ihamba phambili. Masithathe uhambo olubonakalayo oluya e-Hakodate! Sicela ubhekisele esihlokweni esilandelayo ukuze uthole imininingwane. Izithombe zokubukwa kobusuku be-Hakodate kusukela e-Mt. Hakodate = Shutterstock Indawo yasebusika esuka eNtabeni i-Hakodate = I-Shutterstock Mt. Hakodate ebonwa kusukela e-Hakodate Port = Shutterstock Idolobha lase-Hakodate elibonwa emthambekeni we-Motomachi = Ithilamu le-Shutterstock City eligijima edolobheni lase-Hakodate = Idolobha lase-Shutterstock Hakodate ubusika i-Kanemori Aka Renga Soko e-Hakodate = I-Shutterstock Hokodate Morning Market eduze ne-Hakodate Station Seafood bowl emakethe yasekuseni yase-Hakodate = Shutterstock Ekhanyisiwe kahle Goryokaku = Shutterstock Ekhanyisiwe kahle Goryokaku = Shutterstock Kukhona iMount Komagatake enhle emaphethelweni e-Shutter Hakodate ukushushuluza kanye ne-snowboarding e-Onuma Park endaweni engaphansi kwe-Hakodate = Imephu ye-Shutterstock yase-Hakodate [imephu ikheli="Hokodate" width="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="dp. -border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable="true" controls="true"] Ngiyabonga ngokufunda kwakhoukuphela. Emuva kokuthi "Okuhamba phambili kwe-Hakodate" Okuthunyelwe okuhlobene: Hakodate! 7 Okuhamba phambili Kokuheha Abavakashi nezinto okumele uzenze Izithombe: Biei noFurano ehlobo Izithombe:Taushubetsu bridge eHokkaido Izithombe: Tomamu eHokkaido Izithombe: Amahhashi eHokkaido Izithombe: Amahlathi amahle eTokachi, Hokkaido Photos: Noboribetsu Onsen -Hokkaido's largest hot spring resort Photos : Izithombe ze-Yokohama: Izithombe ze-Koyasan: Amadolobhana ambozwe yiqhwa e-Japan Izithombe: I-Okinawa Enhle ...
Ama ifotho Fukushima
Izithombe: LineTadami Line esifundeni saseFukushima
Uma ufuna ukujabulela ukubukwa okuhle kwezindawo zasemaphandleni zase-Japan kusukela esitimeleni, ngincoma i-JR Tadami Line entshonalanga ye-Fukushima Prefecture. Ulayini weTadami usuka e-Aizu-Wakamatsu, idolobha lasendulo lapho ungezwa khona isiko lamaSamurai aseJapan, ezintabeni. Izithombe zikaTadami Line JR Tadami Line eFukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line eFukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line eFukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line eFukushima Prefecture = Shutterstock JR Tadami Line in Fukushima Prefecture = Tada Shutterfecture yaseFukushima Prefecture JR = Ulayini we-Pixta JR Tadami esiFundeni saseFukushima = Ulayini weShutterstock JR Tadami eFukushima Prefecture = Ulayini we-Pixta JR Tadami eFukushima Prefecture = Imephu yeShutterstock yase-Aizu-Wakamatsu [ikheli lemephu="Aizu-Wakamatsu" wide="100%" height="300px " api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="7" draggable="true" controls="true"] Ngiyabonga ngokufunda kuze kube sekugcineni . Buyela ku-"Best of Fukushima"Okuthunyelwe okuhlobene: Izithombe: I-Ouchijuku Village eFukushima Prefecture Izithombe: IHanamiyama Park eFukushima Prefecture Fukushima Prefecture! Izikhangibavakashi ezihamba phambili nezinto okufanele zenziwe Izithombe: IMiharu Takizakura - Isihlahla sama-cherry esihle kakhulu eJapan! Izithombe: Ise Jingu Shrine eMie Prefecture Izithombe: I-Kanazawa e-Ishikawa prefecture Izithombe: I-Motonosumi Shrine e-Yamaguchi Prefecture Izithombe: I-Gunkanjima Island e-Nagasaki Prefecture Izithombe: I-Togakushi Shrine e-Nagano Prefecture Izithombe: I-Biwako Valley eShiga Prefecture Izithombe: Takachiho e-Miyagaki Prefecture Izithombe: Imizana embozwe yiqhwa eJapane
Ama ifotho Oita
Izithombe: I-Beppu (1) Yindawo enhle yokushisa yasentwasahlobo ecwebezelayo
I-Beppu, esempumalanga ye-Kyushu, iyindawo enkulu yokuphumula yasentwasahlobo eshisayo yaseJapan. Uma uvakashela i-Beppu, uzoqala ngokumangala imithombo eshisayo ephuma lapha nalaphaya. Uma ubuka endaweni yedolobha lase-Beppu usuka egqumeni, njengoba ubona kuleli khasi, umusi ukhuphuka yonke indawo. Abawona neze umlilo. Ebusuku, lezi zimusi ziyakhanyisa futhi zikhanye kahle. Izithombe ze-Beppu Imephu yase-Beppu [ikheli lemephu="Beppu, Oita" width="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map-map-dp- centered" zoom="9" draggable="true" controls="true"] Ngiyabonga ngokufunda kuze kube sekugcineni. Sicela ubone ezinye izithombe. Emuva kokuthi "Okuhle kwe-Beppu" Mayelana nami Bon KUROSAWA Sekuyisikhathi eside ngisebenza njengomhleli omkhulu we-Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) futhi njengamanje ngisebenza njengombhali wewebhu ozimele. Kwa-NIKKEI, ngangingumhleli oyinhloko wezindaba mayelana nesiko lamaJapane. Ake ngethule izinto eziningi ezijabulisayo nezithokozisayo nge-Japan. Sicela ubheke lesi sihloko ukuze uthole imininingwane eyengeziwe. Okuthunyelwe okuhlobene: Izithombe: I-Beppu (4) Jabulela iziphethu ezishisayo ngezitayela ezahlukahlukene! Beppu! Jabulela endaweni enkulu yokuphumula yasentwasahlobo eshisayo yaseJapan! Izithombe: Beppu (3) Masivakashele Izihogo ezahlukahlukene (Jigoku） Izithombe: I-Beppu (2) Izinguquko ezinhle zezinkathi ezine zonyaka!Izithombe: I-Noboribetsu Onsen -Hokkaido's hot spring resort enkulu kunazo zonke e-Shining Spring kanye Nesithwathwa Esikude: Kusuka ezithombeni ezinhle eziyi-10! Izithombe : I-Hakone -Indawo enconyiwe yasentwasahlobo eshisayo eduze kwase-Tokyo Izithombe: Ubusika e-Niseko Ski Resort e-Hokkaido -Jabulela iqhwa eliyimpushana! Izithombe: I-Kinosaki Onsen -Kudume kakhulu ukushisa kwendabuko ...
Izithombe: I-Miharu Takizakura -Isihlahla esihle kakhulu se-cherry eJapan!
Uma ungangibuza ukuthi iyiphi i-cherry blossom enhle kunazo zonke e-Japan, ngizothi i-Miharu Takizakura e-Fukushima Prefecture.Isihlahla se-Miharu Takizakura sineminyaka engaphezu kwe-1000 ubudala. Lesi sihlahla esihle secherry kudala sivikelwa futhi sithandwa abantu bendawo. Masingene ohambweni olubonakalayo ukuze sithokozele i-Miharu Takizakura! Izithombe zeMiharu Takizakura I Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock I Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock I Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock I Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock I Miharu Takizakura in Fukushimastock = Shutterstock Miharu Takizakura in Fukushimastock Prefecture = Shutterstock I Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock I Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock I Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock The Miharu Takizakura in Fukushima Prefecture = Shutterstock Map of Miharu Takizakura [map address = "Map Takizakura") " width="100%" height="500px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="dp-light-border-map dp-map-centered" zoom="8" draggable=true" controls "iqiniso"] Ngiyabonga ngokufunda kuze kube sekugcineni. Buyela ku-"Best of Fukushima" Okuthunyelwe okuhlobene: Izithombe: Ipaki yaseHanamiyama eFukushima Prefecture Photos: 11 Amagama angukhiye ukuze ujabulele ngokugcwele Ama-Japanese Cherry Blossoms Izithombe: Amadolobhana ambozwe yiqhwa e-Japan Izithombe: Intaba Yoshino -30,000 izihlahla zama-cherry ziyaqhakaza entwasahlobo! Izithombe: Izithombe ze-Koyasan: I-Ise Jingu Shrine e-Mie Prefecture Izithombe: I-Kanazawa esifundeni sase-Ishikawa Izithombe: I-San'in -Izwe elingaqondakali lapho kusele khona i-Japan yakudala! Izithombe: I-Biwako Valley in Shiga Prefecture Izithombe: I-Shogawa Gorge cruise -River ...
Ama ifotho Miyazaki
Izithombe: UTakachiho esifundeni saseMiyagaki
I-Takachiho iyizwe elingaqondakali elaziwa ngokuthi ikhaya lezinganekwane zaseJapane. Itholakala endaweni enezintaba yaseMiyazaki Prefecture empumalanga yeKyushu. Idolobhana lisawagcina amabala ezinganekwane nemidanso yeKagura ehambisana nazo. Idume futhi ngolwandle oluhle lwamafu ekwindla. Futhi indawo edume kakhulu yezivakashi kuleli dolobha iTakachiho Gorge. Ake sithathe uhambo oluya eTakachiho ngezithombe eziningi! Izithombe zika Takachiho Takachiho e Miyagaki Prefecture = Shutterstock Takachiho in Miyagaki Prefecture = ADobeStock Takachiho in Miyagaki Prefecture Takachiho in Miyagaki Prefecture = Shutterstock Takachiho in Miyagaki Prefecture = Shutterstock Takachiho in Miyagaki Prefecture in Miyagaki Prefecture Takahoki Prefecture Takahoki Prefecture Takahoki Prefecture Takako eMiyagaki Prefecture Imephu Takachiho [ikheli lemephu="Takachiho, Miyazaki Prefecture" wide="100%" height="300px" api="AIzaSyDvB87bpqAqs_d8wlvYARF8obRvaO3PEN4" theme="discreet" class="order-map-dp-dplight" -centered" zoom="9" draggable="true" controls="true"] Ngiyabonga ngokufunda kuze kube sekugcineni. Emuva kokuthi "Okungcono Kakhulu KwaseMiyazaki" Okuthunyelwe Okuhlobene: Izithombe: I-Oze e-Gunma Prefecture Izithombe: I-Biwako Valley in Shiga Prefecture Izithombe: Kanazawa esifundeni sase-Ishikawa Izithombe: Ipaki Hanamiyama eFukushima Prefecture Izithombe Zesifunda: I-Togakushi Shrine in Nagano Prefecture Izithombe: Motonosumi Shrine in Yamaguchi Prefecture Photos: Tadami Line in Fukushima Prefecture Photos: Shuri Castle in Okinawa Prefecture Photos: Matsue in Shimane Prefecture Photos: Hikone Castle in Shiga Prefecture
Umlayezo ovela kusihleli:
Ngiyabonga ngokuvakashela “Best of Japan”! Igama lami nginguBon Kurosawa futhi inhloso yami ukuhlinzeka ngemininingwane ewusizo izivakashi ezinethemba futhi nalabo abanentshisekelo eJapan bayakudinga. Lezi zihloko, izithombe kanye nevidiyo kuzokunikeza ukunambitheka okungafani kweJapan. Ngiyethemba ukuthi ngo “Best of Japan”Uzozizwa usondelene neJapan futhi ube nombono ongcono wokuthi yini ongayilindela.
Jabulela iJapan kulesi siza!
Lesi siza sibukwa kangcono kusuka kukhompyutha. Amanye amavidiyo kungenzeka angadlali kusuka kwi-smartphone yakho. Kodwa-ke, kusuka ku-smartphone yakho usengafinyelela izindatshana ezikunika imininingwane yakamuva ngeJapan. Izixhumanisi ezingaphandle zale webhusayithi zingasetshenziswa futhi ukuze usizakale.
Kuneziza eziningi ezethula iJapan. Yize leli sayithi lisanda kuqala ngizoqhubeka nokuvuselela okuqukethwe kwalo njalo.
Uma ufuna ukufunda ngeJapan noma udinga okuthile okujabulisayo ongakufunda "Best of Japan"Indlela yakho enhle!
Imenyu yaleli sayithi
Ungathanda ukuhlola iJapan kusuka kuliphi ikhasi?
Impilo namasiko amaJapan! phila ngokuhambisana nemvelo nabantu
Ukusuka lapha ngithanda ukukwazisa ngempilo namasiko amaJapan. Ngicabanga ukuthi igama elingukhiye ukuqonda impilo namasiko aseJapan "yiHarmony". Ngakho-ke, ngithanda ukufingqa impilo namasiko aseJapan ngokwalo mbono "wokuvumelana" kuleli sayithi. "IHarmony" esuselwa empilweni nasempucukweni yaseJapan Unasiphi isithombe ngeJapan? Kwabanye abantu, iJapane ibonakala iyizwe okunzima kakhulu ukuliqonda. IJapane ingaba "yiGalapagos" ngomqondo othile. Ezweni eliyisiqhingi kude nezwekazi, impilo namasiko ayingqayizivele akhulisiwe. Ngemuva kokuza eJapan, abantu abaningi bayamangala ngempilo namasiko akhule njengamaGalapagos. Ngenkathi amadolobha amakhulu njengeTokyo ne-Osaka esathuthuka, isimo esinothile sezinkathi ezine zamukela izivakashi. Amasiko afana namathempeli, i-sumo kanye ne-kabuki asekhona, kepha amasiko amasha afana ne-animation, i-cosplay, amarobhothi, njll. Azalwa ngokulandelana. Izwe lapho zonke izinto eziphikisanayo ziyizimpawu. Lelo yiJapan. Uma uqhafaza isithombe esingezansi, uzolethwa emhlabeni wokuvumelana okuyimfihlakalo kwaseJapan. Ngilungiselele amakhasi ahlukahlukene, ngakho-ke ngicela uvakashele amakhasi amaningi bese uzijabulisa. Ukuhambisana neMvelo Ukuvumelana Nabantu Isiko Isimanjemanje Amavidiyo anconyiwe wethula impilo namasiko amaJapane ngiyabonga ukuthi ufunde kuze kube sekugcineni. Ukubuyela Ekhaya Ngami Bon KUROSAWA Kudala ngisebenza njengomhleli omkhulu kaNihon Keizai Shimbun (NIKKEI) futhi njengamanje ngisebenza njengombhali wewebhu ozimele. KwaNIKKEI, bengi ...
Izinto ezinhle kakhulu ongazenza eJapan nokuthi ungabhuka kanjani
Kunezinto eziningi ongazijabulela ohambweni lwakho oluya eJapan. Phakathi kwazo, hlobo luni lwezinto ohlose ukwakha uhlelo lwakho lokuhamba ngazo? Kuleli khasi, ngabala ongakujabulela eJapan. Sicela uchofoze esithombeni sento onentshisekelo kuyo bese uthola imininingwane eningiliziwe. Imininingwane eyisisekelo yokubhuka amathikithi kanye nohambo izivakashi zakwamanye amazwe ezingaziwa ezigqoke i-kimono, imvunulo yesiko laseJapan ehamba ethempelini laseSensoji ithempeli elidumile eTokyo, eJapan = shutterstock Ngaphambi kokuchaza okufanele ukujabulele eJapan, sicela wazi imininingwane eyodwa eyisisekelo yokwenza uhambo lwakho luyamangalisa. Lokhu kumayelana nokuthi ungabhuka kanjani amathikithi ahlukahlukene kanye nohambo. Ngingenisa leli phuzu esihlokweni esilandelayo, ngakho-ke ngicela ungene uma unentshisekelo. 20 Izinto ezihamba phambili ongazijabulela ohambweni lwakho oluya eJapan Bese, ngezansi, ngizobhala izinto ezingama-20 engizincomayo kuwe. Uma uchofoza esithombeni ngasinye, ungahambisa ku-athikili ehambisanayo. Izindawo ZaseJapan Zokuthenga Ukudla Kweqhwa Izimbali ZaseCherry Ziqhakaza Izimbali Amantombazane amabili aseJapane ahlala phansi kukhaphethi obomvu ukuze abone futhi ajabulele i-Autumn amahlamvu amibalabala engadini yaseJapan ethempelini lase-Enkoji, eKyoto, eJapane. Nayi iRinzai Zen Sect futhi idume kakhulu ngesikhathi sekwindla = shutterstock Autumn Leaves izingadi zaseJapan i-Onsen (Hot Spring) Izilwane nezinhlanzi eziHiking Cosplayer njengabalingiswa baseJapan cosplay festival .Abadlali beCosplayers bavame ukuhlangana ukudala amasiko, nokusetshenziswa okubanzi kwaleli gama " i-cosplay ", Osaka, Japan = Amapaki Okuzijabulisa nama-Theme Parks Festivals ...
Izindawo Zokuvakasha ezihamba phambili eJapan! ubusika, intwasahlobo, ihlobo, ekwindla
Kuleli sayithi, nginamakhasi engingawethula ngawodwana ezingxenyeni ezahlukahlukene zaseJapan. Ungaya emakhasini ngokubuka imenyu bese uchofoza ezihlokweni onentshisekelo kuzo. Kepha-ke ngibhale lawa makhasi ngezansi. Bheka okulandelayo futhi uma kukhona ikhasi lesithakazelo sakho, sicela uchofoze kuso bese uya kulelo khasi. Ngoba iJapan izwe elibanzi kakhulu enyakatho naseningizimu, iHokkaido enyakatho neKyushu ne-Okinawa eningizimu zihluke kakhulu. Ngiyethemba ukuthi uzothola iJapane yakho oyithandayo kusayithi lami. Izindlela ezihamba phambili ezihamba phambili eziyi-10: Ungathanda ukuyaphi? Uma ufuna ukubuka kabanzi ukuthi hlobo luni lwezindawo zokubuka indawo eziseJapane, sicela ufunde ikhasi elilandelayo. Izindawo ezihamba phambili lapho uvakasha eJapan Izindawo ezidume kakhulu eJapan yilezi ezilandelayo. Bheka izithombe ze-slide bese uqhafaza kunoma iyiphi indawo onentshisekelo kuyo. Okulandelayo yizihloko ezihlobene ngesifunda. Izindawo ezinconyiwe zaseHokkaido Sapporo Hakodate Furano / Biei Tohoku region (Northeastern part of Honshu) izindawo ezinconyiwe Sendai (Miyagi Prefecture) Towada, Oirase (Aomori Prefecture) Aizuwakamatsu (Fukushima prefecture) Kanto Region (Around Tokyo） Recommended Kanawa Tokyo Tokyo) (I-Kanagawa Prefecture) Isifunda saseChubu (Central Honshu) Izindawo ezinconyiwe Mt.Fuji (Yamanashi, Shizuoka Prefecture) Shirakawago (Gifu Prefecture) Kanazawa (Ishikawa Prefecture) Isifunda saseKansai (Around Kyoto nase-Osaka) Izindawo Ezinconyiwe ZaseKyoto (Isifunda saseKyoto) Nara (Isifunda saseNara ) Osaka (Osaka Prefecture) Chugoku Region (Western Honshu) izindawo ezinconyiwe Hiroshima (Hiroshima Prefecture) Miyajima (Hiroshima Prefecture) Matsue (Shimane ...
Ungabhuka Kanjani Indawo yokuhlala eJapan!
Kunabantu abanezinto zokuzilibazisa ezahlukahlukene. Empeleni, ngiyakuthanda ukuqhathanisa amasayithi wokubhuka amahhotela. Lapho ngibhuka ihotela, ngiyibheka ngezindawo eziningi zokubhuka bese ngiyibhuka nesayithi engangikholwe kakhulu ngalo. Kimi ngokuzilibazisa okunjalo, nginomuzwa wokuthi kunabavakashi abasebenzisa amasayithi wokubhuka engingakwazi ukuncoma okuningi. Ngakho-ke, ngizokwethula ngezindawo zokubhuka zamahhotela ezinconyelwe wonke umuntu ngokwenza isayithi elihlukile kune- "Best of Japan"kusukela manje kuqhubeke. Kuleli khasi, ngizokwethula ezinye zezindawo zokubhuka zamahhotela engizikhuthazayo. Ngemininingwane mayelana nokuhlala eJapan njengehhotela, iRyokan, Minshuku sicela ubheke lesi sihloko esilandelayo. Chofoza isithombe ngasinye, indawo yokubhuka izoba iboniswe ekhasini elihlukile 2 Izindawo eziQhathaniswa Kakhulu Zokuqashwa Kwendawo Yokubhuka eJapan Kuneziza eziningi impela ongabhuka kuzo ihotela noma iRyokan eJapan. Cishe akunakwenzeka ukukubona konke. Ngakho-ke, into yokuqala engingathanda ukuyincoma 'amasayithi wokuqhathanisa' lapho ungaqhathanisa khona nezinhlelo zokuhlala zezindawo eziningi zokubhuka zamahhotela. I-TripAdvisor TripAdvisor Uma ufuna ukuthola indawo yokuhlala elungele idolobha elithile njengeTokyo noma i-Kyoto, ngincoma ukuthi uqale uhlole ku-TripAdvisor. isiza sokuqhathanisa esidume kakhulu. Le sayithi inezinzuzo ezimbili. Okokuqala, ngokusebenzisa i-TripAdvisor, ungaqoqa imininingwane ngamahhotela akalwe kakhulu njll. edolobheni ozoya kulo. Okwesibili, ungathola i -ommomm eshibhile uhlelo lokuphamba ...
Ezokuhamba eJapan! IJapan Rail Pass, Shinkansen, Izikhumulo zezindiza njll.
Uma uhamba eJapan ungahamba kahle kakhulu ngokuhlanganisa i-shinkansen (Bullet train), indiza, ibhasi, itekisi, ukuqashwa kwezimoto njll. Uma ungeza uhambo lwe-Shinkansen ohambweni lwakho, kuzoba yinkumbulo emnandi. Uma kunjalo, ukuthenga i- "Japan Rail Pass" kungaba nengqondo impela. Kuleli khasi, ngizokwethula ukubuka konke kwazo. Leli khasi lide impela. Uma uchofoza inkinobho ethi "bonisa" entweni ngayinye, okuqukethwe okufihliwe okuningiliziwe kuzoboniswa. ngicela uthathe ithuba lokuqukethwe. Ungabuyela phezulu ngokucindezela inkinobho yomcibisholo ngezansi kwesokudla saleli khasi. I-Japan Rail Pass iwebhusayithi esemthethweni ye- "Japan Rail Pass". Chofoza bese uzoboniswa ekhasini elihlukile Ukuchofoza isithombe kuzobonisa le mephu kuwebhusayithi esemthethweni yeJapan Rail Pass ekhasini elihlukile Mayelana Uma uhlela ukuhamba ungene ngaphakathi kweJapane usebenzisa izitimela ze-JR njengeShinkansen, ungahle uthande ukuthenga "Japan Rail Pass" ngaphambi kokuhamba. I-Japan Rail Pass (eyaziwa nangokuthi i-JR Pass) iyindlela yokudlula imali yesitimela i-JR enikeza izivakashi zakwamanye amazwe. Ungagibela okuningi ku-JR's Shinkansen ne-express ejwayelekile njll. Intengo yeJapan Rail Pass, ngokwesibonelo, ama-yen angu-33,000 umuntu ngamunye (izinsuku eziyi-7, uhlobo lohlobo lwemoto olujwayelekile). EJapan, kuthatha cishe ama-yen angama-28,000 ngomuntu oyedwa ukuya nokubuya phakathi kweTokyo ne-Osaka eShinkansen. Uma usebenzisa i-JR eningi, iJapan Rail Pass izoba "umngane" wakho onamandla kakhulu. Ngezansi i ...
Izindatshana ezinconyiwe / Ukulungiselela
Ake ngingenise ezinye izindatshana ezikulesi siza.
Kunabantu abanezinto zokuzilibazisa ezahlukahlukene. Empeleni, ngiyakuthanda ukuqhathanisa amasayithi wokubhuka amahhotela. Lapho ngibhuka ihotela, ngiyibheka ngezindawo eziningi zokubhuka bese ngiyibhuka nesayithi engangikholwe kakhulu ngalo. Kimi ngokuzilibazisa okunjalo, nginomuzwa wokuthi kunabavakashi ...
Ungawabhuka kanjani futhi uthenge amathikithi nokuvakasha eJapan! I-Sumo, i-baseball, ikhonsathi, imisebenzi ...
Uma ungabambi iqhaza kuhambo olusebenza neqembu elikhulu futhi uhamba ngokukhululeka nabangane noma nomndeni eJapan, uwahambisa kanjani amathikithi emincintiswano yezemidlalo namakhonsathi. Noma ulufaka kanjani isicelo izinkambo ezifana nemisebenzi? Kunamasayithi wokubhuka ...
Lapho uhamba eJapan ungahamba kahle ngokuhlanganisa i-shinkansen (Bullet train), indiza, ibhasi, itekisi, ukuqashwa kwezimoto njll. Uma ungeza uhambo lokuhamba lwamaShinkansen uhambo lwakho, kuzoba inkumbulo emnandi. Uma kunjalo, ukuthenga "iJapan Rail Pass" kungaba nengqondo kakhulu. Kuleli khasi, ngizo ...
Izindatshana ezinconyiwe / Izindawo
Kulesi siza, nginamakhasi okufanele ngawethule ngawodwa ezingxenyeni ezahlukahlukene zeJapan. Ungaya amakhasi ngokubheka imenyu bese uqhafaza ezihlokweni onentshisekelo kuzo. Noma kunjalo, ngiwabhale la makhasi ngezansi. Bheka okulandelayo futhi uma kukhona ikhasi lakho ...
Izinto ezinhle kakhulu ongazenza eTokyo: Asakusa, Ginza, Shinjuku, Shibuya, Disney njll.
ITokyo inhloko-dolobha yaseJapan. Ngenkathi isiko lendabuko lisasekhona, ukuqamba okusha kwanamuhla kwenzeka njalo. Sicela ufike uvakashele iTokyo uzwe amandla. Kuleli khasi, ngizokwethula izindawo zabavakashi kanye nokubona izindawo okuthandwa kakhulu eTokyo. Leli khasi lide kakhulu. Uma ufunda leli khasi, ...
I-Kyoto! 26 Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili: Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji njll.
I-Kyoto yidolobha elihle elidla ifa lesiko lendabuko laseJapan. Uma uya eKyoto, ungajabulela isiko lendabuko laseJapan kokuqukethwe kwenhliziyo yakho. Kuleli khasi, ngizokwethula izinto eziheha izivakashi ezinconyelwe ikakhulukazi eKyoto. Leli khasi lide, kepha uma ulifunda leli khasi ...
Izindatshana ezinconyiwe / Izintshisekelo
Kunezinto eziningi ongazijabulela ohambweni lwakho lokuya eJapan. Phakathi kwazo, hlobo luni lwezinto ohlose ukuzakhela uhlelo lwakho lokuhamba? Kuleli khasi, ngibalule ukuthi yini ongakujabulela eJapan. Uyacelwa ukuthi uchofoze esithombeni sento oyithandayo futhi ...
Izindawo ezi-12 ezihamba phambili zeqhwa eJapane: Shirakawago, Jigokudani, Niseko, Sapporo festival festival ...
Kuleli khasi, ngithanda ukwethula ngesimo seqhwa esihle eJapan. Kunezindawo eziningi zeqhwa eJapan, ngakho-ke kunzima ukunquma izindawo ezingcono kakhulu zeqhwa. Kuleli khasi, ngifingqe izindawo ezingcono kakhulu, ikakhulukazi ezindaweni ezidumile phakathi kwezivakashi zakwamanye amazwe. Ngizoyabelana ngayo ...
Best Cherry Blossom Spots kanye Isizini eJapan! IHirosaki castle, Mt.Yoshino ...
Kuleli khasi, ngizokwethula izindawo zokubona ngezimbali ezinhle ze-cherry. Ngoba abantu baseJapan batshala izimbali ze-cherry lapha nalaphaya, kunzima kakhulu ukunquma indawo engcono kakhulu. Kuleli khasi, ngizokwethula ezindaweni lapho abahambi abavela emazweni angaphandle bangajabulela khona imizwa yaseJapane ngezimbali ze-cherry. ...
Imininingwane eyisisekelo eyi-11 okufanele uyazi ngaphambi kokuhamba eJapan
Izidalwa zaseJapan ezivela kulo mbukiso wama-slide ngokuqinisekile zizokudlulisela ulwazi oluwusizo kuwe!
Yisiphi isikhathi esingcono kakhulu sokuvakashela iJapan?
Ngisiphi isikhathi esihle sonyaka sokuvakashela eJapan? Impendulo incike enjongweni yakho yokuhamba. Mhlawumbe ufuna ukubona izimbali ezidumile zaseJapane? Uma kunjalo, ngincoma ukuza eJapane ngenyanga ka-Ephreli. Mhlawumbe ufuna ukubona izindawo ezinhle ezineqhwa? Zama ukuvakashela iHokkaido, iTohoku noma iNagano kusuka ngoJanuwari kuya kuFebhuwari. Uma ufuna ukujabulela amaqabunga ekwindla, cishe ngoNovemba yiyona ehamba phambili. Uma uzobona amaqabunga ekwindla eHokkaido, cishe ngo-Okthoba yiyona ehamba phambili. Lo mbhalo uqokomisa izinkathi ezithile zonyaka ezinhle kakhulu. Intwasahlobo - Mashi, Ephreli, Meyi: Isikhathi sezimbali ezinhle Mt. I-Fuji, Japan = I-Adobe Stock Nemophila eHitachi Seaside Park, e-Ibaraki, eJapan isikhathi saseNtwasahlobo eJapan sisezinyangeni zikaMashi, Ephreli noMeyi. Amaviki amathathu okugcina kaMashi kanye namaviki amathathu okuqala ka-Ephreli izikhathi ezifanele zokuhamba entwasahlobo. Abafundi bayaqeda unyaka wesikole kanti nabantu abadala abasebenzayo basaqhubeka nomsebenzi. Unyaka wesikole waseJapan uqala ngo-Ephreli bese uqeda unyaka olandelayo ngoMashi. Izimbali ze-Cherry ziyaqhakaza phakathi nesikhathi samasonto amabili phakathi nonyaka wesikole. Ngokuya ngokuthi uya kuphi eJapan, cishe ngaso sonke isikhathi uzokwazi ukuthola umkhosi we-cherry blossom ongaya kuwo. Isimo sezulu sasentwasahlobo sihle kakhulu emini kodwa ubusuku kungenzeka busabanda kakhulu Ehlobo - ngoJuni, Julayi, Agasti: IHokkaido nemikhosi yasehlobo kunconywa Inkundla yezimbali enemibala nesibhakabhaka esiluhlaza eShikisai-no-oka, eBiei, Hokkaido, .. .
Ulimi! Izinto ezi-3 okufanele uzikhumbule lapho ukhuluma nabantu baseJapan
Abantu abaningi baseJapan abakwazi ukusebenzisa isiNgisi. Ngalesi sizathu, abantu abeza eJapan abakwazi ukuxhumana kahle nabantu baseJapan. Abezinye izizwe kwesinye isikhathi bayazibuza ukuthi bangacela kanjani noma ngubani usizo lapho belahleka noma bedinga imininingwane. Uma beya edolobheni elincane noma isigodi abakwazi ukuxhumana kalula nabantu endaweni yokudlela noma ehhotela. EJapan, Yini ongayenza ukuxhumana nabantu baseJapan? Ngincoma izinto ezintathu ezilandelayo. Ake sithi "Sumimasen" Uma uqala ukukhuluma nomuntu waseJapan ongamazi, kufanele uqale usebenzise umusho olandelayo waseJapan. "Sumimasen" Lokhu kunencazelo efanayo nokuthi "Uxolo" noma "Uxolo (ukukuhlupha)" ngesiNgisi. NgesiJapane, le nkulumo isetshenziswa kaningi. I- "Sumimasen" nayo ingasetshenziswa njenge- “ngiyabonga” noma isetshenziselwe ukucela usizo esitolo noma endaweni yokudlela. Le nkulumo ilusizo kakhulu uma ufuna ukunakwa ngothile. Ngokuvamile, abantu abavela eJapane abakwazi ukukhuluma isiNgisi. Kodwa-ke, uma uthi "uSumimasen" kumuntu waseJapan bazokuma balalele okushoyo. Abantu baseJapan banomusa futhi bayamukela kubantu bakwamanye amazwe ngakho-ke sicela ukhululeke ukusebenzisa i- "Sumimasen" uma udinga usizo. Ungakhohlwa ukubonga othile ngokulalela futhi. Ungakhathazeki. Abantu baseJapan bayayiqonda indlela yokuthi “Ngiyabonga” ngesiNgisi ukuze baqonde ukubonga kwakho. Bhala izincwadi ephepheni AmaJapane anamahloni, kepha uma usenkingeni, sizokusiza. = Ukuvalwa kwesivalo ...
Imali yaseJapan Ungayishintsha kanjani imali nokuthi ungayikhokha kanjani
Imali eJapane yiYen. Leli khasi linezilinganiso zamanje zokushintshaniswa ngakho-ke ngicela ubheke lapha ngaphambi kokushintshisana ngemali. Lapha uzothola ulwazi ngezikweletu zaseJapan nezimali zemali. Ngaphezu kwalokho ngizochaza isimo samanje maqondana nokusetshenziswa kwamakhadi wesikweletu eJapan. Uhlu lwamanani wokushintshaniswa: i-currecy / USD yaseJapan, njll. Yimalini i-yen engu-1 kumali yezwe lakho? Umthombo: www.exchange-rates.org Amanothi nezimali zemali yasebhange zaseJapan Amaphuzu Ama-Banknotes eJapan = I-Adobe Stock Kunezinhlobo ezine zamaphepha emali eJapan. Inothi mhlawumbe ozolisebenzisa kakhulu liphethe inani lama-yen ayi-1000. Ama-yen ayi-10,000 ama-yen ayi-5,000 ama-yen ama-yen ama-yen ayizinkulungwane eziyi-2,000 1,000 e-Japan = I-Adobe Stock Kunezinhlobo ezine zemali eJapan. Lindela ukusebenzisa ama-yen ayi-100 no-yen ayi-10 kaningi. 500 yen 100 yen 50 yen 10 yen 5 yen 1 yen XNUMX yen Amavidiyo anconyiwe ahlobene nemali yaseJapan Inkokhelo eJapan Amaphuzu Kusekhona izitolo eziningi ezemukela ukheshi eJapane kuphela, kunezitolo eziningi ezemukela imali kuphela. Kumahhotela amaningi, ezitolo ezinkulu, ezitolo ezinkulu, ungasebenzisa amakhadi esikweletu uma uhamba edolobheni. Ngisho namanye amatekisi asemukele amakhadi esikweletu muva nje. Imishini eminingi yokuthengisa ethenga amathikithi esitimela ingasebenzisa amakhadi wesikweletu. Kodwa-ke, uma ukhokha imali yokungena ethempelini noma endaweni engcwele, kufanele ube nemali etholakala kalula. Shintshanisa imali yakho esikhumulweni sezindiza eJapane, zimbalwa kakhulu izitolo ezamukela ukheshi ngaphandle kwen yen yaseJapan. Ngakho-ke, ...
Kunconywe amasayithi awusizo lapho ulungiselela uhambo lwakho lokuya eJapan
Kuleli khasi, ngizokwethula amawebhusayithi ahlukahlukene ahlobene neJapan. Ngizovuselela le mininingwane ngezikhathi ezithile. Kungaba ngumthombo osizayo ongawusebenzisa ukuqoqa imininingwane. Amahhotela, ezokuthutha, izindawo zokudlela kanye namawebhusayithi ahlobene nendawo afingqiwe ngokuningiliziwe ngezigaba. Njengoba kunezixhumanisi ezansi kwaleli khasi, sicela uye ekhasini ofuna ukulibona lapho. Amasayithi afundisa kabanzi ngeJapan Japan National Tourism Organisation Japan Japan Tourism Organisation (JNTO) iwindi elihlobene nezokuvakasha likahulumeni waseJapan. Iwebhusayithi esemthethweni yeJNTO iqukethe imininingwane eminingi yokubona indawo eJapan. Lolu lwazi lungezilimi eziyi-15. Uma kunezinhlekelele ezinkulu eJapan, le webhusayithi esemthethweni izohlinzeka ngemininingwane edingekayo kubavakashi bakwamanye amazwe. >> Iwebhusayithi esemthethweni yeJNTO ilapha japan-guide.com japan-guide.com yiwebhusayithi edumile eqhutshwa ngabokufika abahlala eJapan. Ikhuphule kancane inani layo lezindatshana selokhu iwebhusayithi yakhiwa. Kungashiwo ukuthi yindawo yokwaziswa yabavakashi ejwayeleke kakhulu kubavakashi abeza eJapan manje. Entwasahlobo, inikeza imininingwane maqondana nokuqhakaza kwezimbali ze-cherry eJapan. >> Iwebhusayithi esemthethweni ye-japan-guide.com ilapha iZEKKEI Japan I-ZEKKEI Japan iwebhusayithi yezokwazisa izivakashi eqhutshwa yinkampani enenhlokohhovisi eGinza, eTokyo. Inikeza izindatshana ezisebenzisa izithombe ezinhle ukwethula ubuhle baseJapan kubantu baphesheya kwezilwandle. "I-ZEKKEI" isho "indawo enhle kakhulu" ngesiJapane. Njengencazelo yegama layo, iyi ...
I-SIM Card vs. Pocket Wi-Fi Rental eJapan! Ungathenga kuphi futhi uqashe kuphi?
Ngesikhathi uhlala eJapan, ungafuna ukusebenzisa i-smartphone. Uyithola kanjani? Kunezindlela eziyisithupha ongazikhetha. Okokuqala, ungasebenzisa insizakalo yokuhambahamba ezinhlelweni zakho zamanje kepha sicela uthinte umhlinzeki wakho wesevisi ngamanani. Okwesibili, ungasebenzisa i-Wi-Fi yamahhala nge-smartphone yakho yamanje ngenkathi uhamba eJapan. Okulandelayo ungabhalisela insizakalo ye-Wi-Fi ekhokhelwayo. Ungasebenzisa futhi ikhadi le-SIM elikhokhelwa elikwazi ukusebenza eJapan nge-smartphone yakho engavulekanga. Ungasebenzisa insizakalo yokuqasha evela ezweni lakho noma eJapan ukuthola i-Wi-Fi router ephakeme, ikhadi le-SIM, noma i-smartphone enekhono. Ekugcineni, ungakwazi ukuqasha ifoni ehlakaniphile kusuka ehhotela lakho. Ngezansi kunolwazi ngakunye kwalokhu ukukhetha ukukusiza uthathe isinqumo. Yini ukukhetha okungcono kakhulu ekusebenziseni kwakho? Umshini wokuthengisela ikhadi leSim ikhadi esikhumulweni sezindiza saseKansai e-Osaka Japan Imininingwane edingekile yokukhetha ithuluzi lohambo lwakho imi ngalendlela elandelayo. Izinsizakalo Ezisebenzayo Zokuzulazula Muva nje, izinsizakalo zokuzulazula ezingasetshenziswa ngemali ephansi emazweni aphesheya bezilokhu zenyuka. Uma kunezinsizakalo ezingabizi zokuhambahamba ngomhlinzeki wakho wamanje cabanga ukuyisebenzisa. Ama-Pocket Wi-Fi Routers Uma uhamba nomndeni wakho noma abangane, kungcono ukusebenzisa i-router ye-Wi-Fi ephaketheni. Nge-router eyodwa ye-Wi-Fi iqembu lakho lingasebenzisa i-Intanethi nge-smartphone engaphezu kweyodwa ngasikhathi. Uma unama-router we-Wi-Fi amabili noma ngaphezulu kulula kuwe ukuthi uhlale uthintana lapho uhlukaniswe ...
Isikhathi saseJapan manje! Umehluko wesikhathi ezweni lakho
Kunendawo eyodwa kuphela yesikhathi eJapan. I-Tokyo, i-Osaka, i-Kyoto, i-Hokkaido, i-Sendai, i-Nagano, i-Hiroshima, i-Fukuoka, i-Kumamoto ne-Okinawa zonke ngasikhathi sinye. Ngaphezu kwalokho, njengoba singekho isikhathi sokonga emini eJapan, akunzima kangako kuwe ukwazi isikhathi saseJapan. IJapane manje yisikhathi esingezansi (Uma isikhathi singakhonjiswa, beka isikhombisi engxenyeni yemephu yaseJapan). Sicela ubheke kulesi sikhathi esingenhla bese uhlola umehluko wesikhathi nendawo ohlala kuyo. Uma izwe lide empumalanga nasentshonalanga, kunezindawo zesikhathi eziningana ezweni elifanayo, kunomehluko wesikhathi. Kodwa-ke, iJapan ayiyinde kangako empumalanga nasentshonalanga. EJapan, umhlaba unwebeka isikhathi eside enyakatho naseningizimu, kepha empumalanga nasentshonalanga awude kangako kangangokuba kudingekile ukukhulisa indawo yesikhathi ibe mibili noma ngaphezulu. Unogwaja okuleli khasi uhlala esiqhingini sase-Ookuno eTakehara City, esifundeni saseHiroshima. Kunabantu abangaba ngu-20 kuphela kulesi siqhingi, kodwa onogwaja abangama-700 bakhona. Encwadini ethi "Adventures ka-Alice e-Wonderland", unogwaja ugijima ngokushesha ebuka iwashi lasemaphaketheni. Uma uya esiqhingini sase-Oono, ungahle uhlangane nonogwaja ongaqondakali. Ngiyabonga ukuthi ufunde kuze kube sekupheleni. Back to "Fundamentals" Mayelana nami Bon KUROSAWA Sekuyisikhathi eside ngisebenza njengomhleli omkhulu kaNihon Keizai Shimbun (NIKKEI) futhi njengamanje ngisebenza njengombhali wewebhu ozimele. Ku-NIKKEI, ...
Amaholide eJapan! Ukuheha izivakashi kugcwele ku-Gold Wiki yasentwasahlobo
Kunamaholide ayi-16 asemthethweni eJapan. Uma leli holidi liba ngeSonto, usuku lweviki olusondele kakhulu (imvamisa ngoMsombuluko) ngemuva kwalokho kuzoba yiholide. Amaholide aseJapan agxila kakhulu evikini kusukela ekupheleni kuka-Ephreli kuya ekuqaleni kukaMeyi. Leli sonto libizwa nge- "Golden Week". Ngaphezu kwalokho, kunezinsuku eziningi zokuphumula kusukela maphakathi noSepthemba kuya ngasekupheleni kukaSepthemba isonto lonke. Leli sonto libizwa ngokuthi "Isonto Lesiliva". Iholide lesikole lisukela ekupheleni kukaJulayi kuze kube sekupheleni kuka-Agasti. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi ngalezi zikhathi izindawo zezivakashi ezweni lonke zizogcwala. Usuku Lonyaka Omusha: Januwari 1 isango leTorii eMeiji Jingu Shrine, eHarajuku, eTokyo = Unyaka Omusha weShutterstock yiholide elibaluleke kakhulu kubantu baseJapan. Abantu abaningi bazothatha ikhefu kusuka ngoDisemba 29th bese bechitha isikhathi nomndeni ngoSuku Lonyaka Omusha. Abantu bavakashela izindawo ezingcwele noma amathempeli ukuyothandazela unyaka omusha. Ukuza Kosuku Lweminyaka: UMsombuluko wesibili kaJanuwari Abesifazane abasebasha baseJapan abagqoke ama-kimono okweminyaka yobudala, ukugubha unyaka abazoba ngawo amashumi amabili = Abesifazane Shutterstock eKimono ngaphandle kwesikhungo samasiko ngesikhathi sokugujwa kosuku lwe-Age Day eKagoshima City, Japan = Shutterstock Ngalolu suku, amaJapane agubha labo abaneminyaka engama-20 ubudala. Omasipala abaningi bagubha inhlonipho yabo. Abantu abasha bagqoka amaKimono noma amaSuits futhi bagubha ukuza kweBudala. Usuku lweNational Foundation: Februwari 11 Lusuku lokugubha isisekelo seJapan. Ngokwenganekwane endala, uMbusi uJinmu, umbusi wokuqala, ...
Imicimbi Yonyaka eJapan! Unyaka omusha, i-Hanami, i-Obon, iKhisimusi nokuningi!
Kusekhona imicimbi eminingi yaminyaka yonke yendabuko eJapan. Abantu abaningi baseJapan bakhetha ukugubha le micimbi yaminyaka yonke nemindeni yabo. Muva nje, izivakashi eziningi zakwamanye amazwe ziyijabulele imicimbi enjalo. Ngomunye wale micimbi ungathola umbono omuhle wesiko laseJapan. Lo mbhalo uchaza le micimbi yaminyaka yonke. Imicimbi yonyaka omusha Imicimbi yaminyaka yonke yoNyaka Omusha mikhulu kakhulu eJapan. Kusukela ekupheleni konyaka le micimbi elandelayo yenzeka minyaka yonke. I-Joya no kane "I-Joya no kane" umcimbi waminyaka yonke obanjelwa emathempelini amaBuddhist = Shutterstock "Joya no kane" umcimbi waminyaka yonke obanjelwa emathempelini amaBuddhist. Phakathi kwamabili ngoDisemba 31 abapristi bashaya izinsimbi ezinkulu zethempeli amahlandla ayi-108. Kukhona izinkathazo ezibonakala zingu-108 kubantu. Okushiwo ngemuva kokukhala kwezinsimbi ukuxosha leyo mizwa. UToshi-Koshi soba "UToshi-Koshi soba" kungama-noodle ngokwesiko adliwe ngoDisemba 31. AmaJapan adla ama-noodle amade ngethemba lokuthi azophila impilo enenhlanhla. Isixuku seHatsumode eHatsumode e-Asakusa eTokyo, eJapan. IHatsumode yithempeli lokuqala lamaShinto noma ukuvakashelwa kwethempeli lamaBuddha oNyaka Omusha waseJapane = Shutterstock "Hatsumode" wukuhambela komuntu okokuqala ngonyaka ukuya endaweni engcwele noma ethempelini. Ngonyaka omusha, yonke indawo engcwele nethempeli kugcwele abantu abaningi abenza lokhu kuvakashela. I-Setsubun "Setsubun" ngumcimbi wendabuko wase-Japan = Shutterstock "Setsubun" umcimbi wendabuko wokuxosha ububi. Izobanjwa ekuqaleni kukaFebhuwari. Abantu baphonsa ubhontshisi ekhaya ngenkathi becula "Oni-wa-soto, fuku-wa-uti," okusho ukuthi "Phuma ...
Isimo sezulu Isimo sezulu Sonyaka eJapan! I-Tokyo, Osaka, Kyoto, Hokkaido njll.
Uma uhlela ukuvakashela eJapan, isimo sezulu nesimo sezulu siyoba njani? Kule ndatshana ngithanda ukwethula isimo sezulu kanye nesimo sezulu saseJapan kanye nezici zendawo ngayinye. Isimo sezulu saseJapan sihlukile iJapan iyisiqhingi esihlangene esandisa amakhilomitha angama-3000 enyakatho naseningizimu. Iqukethe iziqhingi ezinkulu ezine kanye neziqhingi ezincane ezingaba ngu-4 6,800. Isimo sezulu sihluke kakhulu phakathi kweHokkaido esenyakatho naseningizimu ne-Okinawa. Ubusika eHokkaido bubanda kakhulu, kanti i-Okinawa imnene kakhulu nasebusika. Izindawo ezineqhwa elisindayo ebusika uhlangothi lwaseJapan lwaseHokkaido nohlangothi loLwandle lwaseJapan enyakatho yeHonshu. Imininingwane: I-Japan Meteorological Agency I-Japan Meteorological Agency I-Japan Meteorological Agency I-Japan Meteorological Agency Isimo sezulu sasebusika: Isithwathwa e-Japan Seaside Heavy Snow Fall eJapan = Shutterstock Njengomgogodla weziqhingi, izintaba zihlala isikhathi eside. Ngenxa yalolu hambo lwezintaba, isimo sezulu sohlangothi lwasePacific lwesiqhingi saseJapan kanye nohlangothi lweJapan Sea luhluke kakhulu. Njalo ebusika, ohlangothini lwezwe lwaseJapan, amafu amaningi anomswakama oLwandle lwaseJapan ahlangana nezintaba. Lapha, iqhwa liwa kaningi. Okwamanje, ngasohlangothini lwePacific, isimo sezulu esicacile sizoqhubeka ebusika. Uma uya ezindaweni ezisentshonalanga nohla lwezintaba phakathi nobusika, ikakhulukazi iHokkaido nenyakatho yeHonshu, uzokwazi ukubona izindawo eziqhwaqhwa. Isikhathi semvula saseJapan: Cishe ngoJuni Owesifazane ogqoke i-kimono yendabuko yaseJapan uhamba ngale ndlela ehlotshiswe nge-hydrangea enhle eluhlaza okwesibhakabhaka (macrophylla) e ...
Ukuzamazama Komhlaba Nezintaba-mlilo eJapane
EJapan, ukuzamazama komhlaba kwenzeka njalo, kusuka ekuthuthumela okuncane okungazwakalanga umzimba kuya ezinhlekeleleni ezinkulu ezibulalayo. AmaJapan amaningi azizwa enenkinga yokungazi ukuthi izinhlekelele zemvelo zizokwenzeka nini. Vele, amathuba okuthola inhlekelele yemvelo enkulu aphansi kakhulu. Iningi labantu baseJapan likwazile ukuthi liphile libe ngaphezu kweminyaka engama-80. Noma kunjalo, lo mqondo wobunzima unethonya elikhulu emoyeni waseJapan. Abantu abakwazi ukunqoba imvelo. Abantu abaningi baseJapan banomuzwa wokuthi kubalulekile ukuphila ngokuvumelana nemvelo. Kulesi sihloko ngizodingida ukuzamazama komhlaba kwamuva nje kanye nokuqhuma kwezintaba-mlilo. Ukuzamazama komhlaba eJapan Uma ungahlala eJapan iminyaka embalwa, ubuzozwa ngokwakho okungenani ukuzamazama komhlaba okuncane. Izakhiwo zaseJapan zenzelwe ukuba zingabhidliki ngisho noma kungaba nokuzamazama komhlaba okukhulu. Ngakho-ke, asikho isidingo sokwesaba. Kodwa-ke, uma ngabe uhlala eJapan amashumi eminyaka, kungenzeka ukuthi kube khona ukuzamazama komhlaba okukhulu. Ngo-2011, lapho kwenzeka ukuzamazama komhlaba okukhulu kwe-Great East Japan Great Earthquake, ngangisebenza e-skyscraper eTokyo futhi ngabona isakhiwo sibhidlika ngamandla. I-East Japan enkulu inhlekelele yokuzamazama komhlaba I-East Japan enkulu inhlekelele yokuzamazama komhlaba, Mashi 11, 2011 Ukuzamazama komhlaba iGreater Japan Earthquake (Higashi-Nihon Daishinsai) ukuzamazama komhlaba okukhulu kakhulu okumehlela enyakatho yeHonshu ngoMashi 11, 2011. Bangaphezu kuka-90% izisulu ezicishe zibe ngu-15,000 ushone ngenxa ye-tsunami eyenzeka ngemuva kokuzamazama komhlaba. Ngemuva kokuzamazama komhlaba okukhulu kwe-Great Hanshin okwenzeka ngonyaka ka-1995, ukwakhiwa kokuzamazama komhlaba sekuthwelwe ngenkuthalo ...
Yini okufanele uyenze uma kunesivunguvungu noma ukuzamazama komhlaba eJapan
Ngisho naseJapan, ukulimala kusuka kwezivunguvungu nezimvula ezinkulu kuyanda ngenxa yokushisa komhlaba. Ngaphezu kwalokho, ukuzamazama komhlaba kuvame ukwenzeka eJapan. Yini okufanele uyenze uma kuvela isivunguvungu noma ukuzamazama komhlaba ngenkathi uhamba eJapan? Vele, kungenzeka ukuthi uhlangane necala elinje. Kodwa-ke, kuwumqondo omuhle ukwazi iziqu uma kwenzeka kunesimo esiphuthumayo. Ngakho-ke, kuleli khasi, ngizoxoxa ukuthi ngenzeni lapho kugadla inhlekelele yemvelo eJapan. Uma ufikelwa yisiphepho noma ukuzamazama komhlaba okukhulu manje, landa uhlelo lukahulumeni waseJapan "amathiphu wokuphepha". Ngaleyo ndlela uthola imininingwane yakamuva. Noma kunjalo, qiniseka ukuthi unayo indawo ephephile yokuphephela. Khuluma nabantu baseJapan abakuzungezile. Yize, ngokuvamile abantu baseJapan abalungile ekukhulumeni isiNgisi, uma usenkingeni basafuna ukusiza. Uma ungasebenzisa i-kanji (izinhlamvu zamaShayina), ungaxhumana nabo ngale ndlela. Thola imininingwane ngesimo sezulu nokuzamazama komhlaba Ihlobo laseTsholotsho lishayisa isikhumulo sezindiza = isithonjana sinaka isibikezelo sezulu! Ngitshelwe ngabahambi abavela phesheya ukuthi "abantu baseJapan bathanda isimo sezulu." Ngokuqinisekile, sihlola isimo sezulu sezulu cishe nsuku zonke. Lokhu kungenxa yokuthi isimo sezulu saseJapan sishintsha njalo. IJapan inezinguquko zonyaka kanye nezivunguvungu ngokuvamile kusuka ehlobo kuya ekwindla. Ngaphezu kwalokho, muva nje, umonakalo ovela emvuleni enkulu ukhuphuke ngenxa yemiphumela yokufudumala komhlaba. Ngaphezu kwalokho, ukuzamazama komhlaba nokuqhuma kwezintaba-mlilo kwenzeka njalo eJapan. Uma uya eJapan, nginga ...
Umbusi waseJapan neJapan Flag
Lapho uhamba eJapan ungazizwa uthokoze ngokujulile ukube ubunolwazi oluyisisekelo ngomlando waseJapan. Leli khasi lizofaka isifinyezo esifushane samaKhosi abalulekile emlandweni waseJapan. Ngaphezu kwalokho, ngizofaka imininingwane mayelana nefulegi likazwelonke laseJapans. UMbusi waseJapane Ukubuka Isigodlo Sombuso, eTokyo. IJapan = Shutterstock IJapane isebenzise i-Emperor System kusukela ezikhathini zasendulo. Umbusi ubizwa ngokuthi "Tenno" ngesiJapane. Ngokomlando, umbusi wokuqala kwakungu-Emperor Jinmu. Kuthiwa i-Emperor Jinmu yathweswa umqhele cishe ngonyaka we-660 BC kepha akuqinisekile. Ukulandelana esihlalweni sobukhosi kwenziwa isikhathi eside ngofuzo. KuMthethosisekelo omdala owashaywa ngo-1889, u-Emperor wayengumbusi. Kodwa-ke, kuMthethosisekelo omusha owashaywa ngo-1946, izakhamizi zanikwa amandla okubusa kanti neNgonyama yaba "uphawu". Namuhla, umndeni wasebukhosini, ogxile ku-Emperor, ubambe iqhaza emsebenzini ongokomfanekiso. Lo msebenzi uhlanganisa ukuya emicimbini yasekhaya neyamazwe omhlaba. I-Royal Family yenza "Ippan Sanga" kabili ngonyaka ukubingelela umphakathi e-Imperial Palace yaseTokyo. Lokhu kwenzeka ngoJanuwari 2 noDisemba 23. Ngalesi sikhathi, abantu abaningi beza e-Imperial Palace bezobamba amazwibela omndeni mathupha, Amavidiyo anconyiwe nge-Emperor of Japan Ifulegi laseJapane ifulegi laseJapan Ifulegi laseJapan libizwa nge- "Hinomaru ". Umbuthano omkhulu obomvu udwetshiwe ngemuva okumhlophe. Umbuthano obomvu umele ilanga eliphumayo. AmaJapan akhonze ilanga ...
Izithombe: Izinsuku zemvula eJapan-Izinkathi zamaRain kukhona uJuni, uSepthemba noMashi
Izithombe: Ithempeli leSensoji e-Asakusa, eTokyo
Izithombe: I-Temple of Rurikoin Temple eKyoto
Ngo-Okthoba eJapan! Amaqabunga Autumn aqala ukusuka endaweni yezintaba!
Izithombe: Isiko LaseJapan bamboo -Arashiyama Bamboo Forest, njll.
Izithombe: Ithempeli laseDaitokuji eKyoto -Umhlaba weZen ngokuhambisana neNdalo
Izithombe: Ithempeli laseKodaiji eKyoto
Janawari eJapan! Ake sijabulele ubusika baseJapan obuhle kakhulu!
Izithombe: IHanamiyama Park eSifundeni SaseFukushima
Zonke Hlela uhambo Uzoya nini (16) Ikhalenda lomcimbi (15) Isimo sezulu nesimo sezulu (65) Izindlela ezihamba phambili ezihamba phambili (30) Indawo yokuhlala (3) Amathikithi nohambo (2) Ukuguqulwa (11) Izingubo (6) ulimi (1) Imali (1) Umehluko Wesikhathi (1) I-inthanethi (1) Ukukhishwa (3) Funda (83) Impilo Namasiko (71) Umlando (4) Amasayithi ahlobene (7)
Zonke izindawo I-Hokkaido (62) UHonshu: Tohoku (47) Isifunda sase-Aomori (9) Isifunda sase-Akita (11) Isifunda sase-Iwate (5) Isifunda saseMiyagi (5) Isifunda saseYamagata (5) Isifunda saseFukushima (8) IsiHonshu: Kanto (81) I-Tokyo (31) I-Tokyo Metropolitan (5) Isifunda saseKanagawa (8) Isifunda saseChiba (4) Isifunda saseSaitama (3) Isifunda sase-Ibaraki (8) Isifunda saseGunma (6) Isifunda saseTochigi (7) UHonshu: Chubu (66) Isifunda saseShizuoka (6) Isifunda saseYamanashi (11) Isifunda saseNagano (15) Isifunda saseNigata (4) Isifunda saseToyama (7) Isifunda sase-Ishikawa (7) Isifunda saseFukui (4) Isifunda saseGifu (13) Isifunda sase-Aichi (3) Isifunda Sami (5) I-Honshu: Kansai (78) Isifunda saseShiga (6) I-Kyoto (33) Isifunda saseKyoto (2) Isifunda saseNara (6) Isifunda saseWakayama (4) I-Osaka (7) Isifunda sase-Osaka (4) Isifunda saseHyogo (8) IsiHonshu: Chugoku (33) Isifunda sase-Okayama (6) Isifunda saseHiroshima (11) Isifunda saseYamaguchi (2) Isifunda saseTottori (4) Isifunda saseSimane (8) Shikoku (17) Isifunda saseTokushima (5) Isifunda saseKagawa (4) Isifunda se-Ehime (3) Isifunda saseKochi (1) UKyushu (37) Isifunda saseFukuoka (5) Isifunda Saga (1) Isifunda saseNagasaki (7) Isifunda saseKumamoto (8) Isifunda sase-Oita (8) Isifunda saseMiyazaki (3) Isifunda saseKagoshima (3) Isifunda sase-Okinawa (13)
Zonke Izithakazelo Amathikithi nohambo (2) Imfashini (8) Ukuthenga (14) Ukudla kwaseJapan (15) Izindawo zeqhwa (77) Izimbali zeCherry (34) Izimbali (32) Izingadi zaseJapan (16) Amaqabunga Ekwindla (54) U-Onsen (22) Izilwane nezinhlanzi (10) Izintaba (67) Ukugibela Okubukekayo (29) Amapaki Okuzijabulisa (6) Ukubukwa kobusuku nokukhanyisa (39) Imikhosi (23) Amathempeli namaShrines (51) Izinqaba (33) Amasayithi Omlando (59) Samurai & Ninja (14) Ubuciko bendabuko (5) Iminyuziyamu (8) AmaManga nama-Anime (7) Amabhishi (11) Ezemidlalo (14) Imboni kanye nezohwebo (8) Ezokuthutha (12)
Zonke Izinkathi Ubusika (52) UDisemba (18) Januwari (15) Februwari (18) Intwasahlobo (47) Kwangathi (13) Mashi (12) Ephreli (17) Ehlobo (37) Juni (12) Julayi (16) Agasti (15) Ikwindla (47) Septhemba (16) Okthoba (16) Novemba (17)
Zonke Tags Abashiri (1) U-Aizu-Wakamatsu (2) I-Akihabara (4) I-Aomori (3) InyaTube (4) I-Asahiyama Zoo (1) I-Asakusa (3) I-Ashikaga Flower Park (3) I-Aso (5) IBeppu (6) I-Biei (19) Ithempeli laseChusonji (3) UDaisetsuzan (5) I-Dotonbori (1) Umnyuziyamu wase-Edo-Tokyo (2) Ithempeli i-Eikando Zenrinji (4) Enoshima (3) I-Fuji-Q Highland (2) Fukuoka (3) UFurano (17) Fushimi Inari-taisha Shrine (4) IsiGinza (3) UGinzan Onsen (4) I-Gion (1) I-Hakodate (16) I-Hakone (4) Umnyuziyamu we-Hakone Open-Air (1) IHakuba (6) Ithempeli laseHasedera (1) Inqaba yaseHimeji (4) IHiroshima Peace Memorial Museum (4) IHitachi Seaside Park (4) I-Huis Ten Bosch (1) Isigodlo Sombuso (2) Ise Grand Shrine (2) Ise Shrine (1) Izumo Taisha (5) IJigokudani Snow Monkey Park (3) I-Kaiyukan (1) I-Kakunodate (5) I-Kamakura (6) IKamikochi (5) I-Kanazawa (5) IKenrokuen Garden (6) Ithempeli laseKinkakuji (4) Ithempeli laseKiyomizudera (7) I-Kobe (3) I-Koyasan (4) Kumamoto Inqaba (2) Kumano Kodo (4) IChibi iKawaguchiko (2) IMatsumoto Castle (4) IMeiji-jingu Shrine (4) Miyajima (10) INtaba. I-Fuji (13) Mt. Takao (3) Mt. Yoshino (4) INabana no Sato (3) I-Nagasaki (3) INara Park (4) UNikko (1) UNikko Tosho-gu (4) UNiseko (7) Odaiba (2) Ukusakaza kwe-Oirase (3) I-Okinawa (9) I-Osaka Castle (3) I-Otaru (14) I-Oze (4) Isiqhingi saseSakurajima (2) ISapporo (22) I-Sendai (3) Ithempeli iSensoji (3) Shibuya (2) I-Shinjuku (4) I-Shinjuku Gyoen National Garden (2) Shirakawago (9) Shiretoko (14) Takachiho Gorge (3) I-Takayama (4) Umzila weTateyama Kurobe Alpine (6) Ithempeli laseTodaiji (4) I-Tokyo Disney (1) Imnyuziyamu Kazwelonke YaseTokyo (2) I-Tokyo Skytree (3) ITokyo Tower (3) Ueno (1) Umeda (1) I-USJ (3) Yakushima (2) Yokohama (2) Yufuin (3) I-Zao (5)
Sicela uchofoze "Hambisa" ngemuva kokukhetha
Hokkaido! Izindawo ezi-21 zabavakashi abadumile kanye nezikhumulo zezindiza eziyi-10
IHokkaido iyisiqhingi sesibili ngobukhulu eJapan ngemuva kweHonshu. Futhi liyisifunda esenyakatho kakhulu nesifunda esikhulu kunazo zonke. IHokkaido iyabanda kunezinye iziqhingi eziseJapan. Ngoba ukuthuthukiswa kweJapan kubambezelekile, kunemvelo enkulu nenhle eHokkaido. Kuleli khasi, ngizokwethula uhlaka lwe ...
Mount Mount Fuji: Izindawo ezinhle kakhulu zokubuka ezi-15 eJapan!
Kuleli khasi, ngizokukhombisa umbono omuhle kakhulu wokubona uMt. Fuji. Mt. IFuji iyintaba ephakeme kunazo zonke eJapan enobubanzi bamamitha angama-3776. Kunamachibi enziwe umsebenzi wentaba-mlilo yaseMt. I-Fuji, nokwakha ubuhle bendawo obuzungezile lokho. Uma ufuna ukubona ...
IJapan Onsen inconyelwe ikakhulukazi izivakashi zakwamanye amazwe
Ngenxa yokuthi iJapane liyizwe elinentabamlilo eminingi kangaka, amanzi asemhlabathini ayafudunyezwa yi-Magma yentaba-mlilo, i-Onsen (Hot Springs) iyaphuma lapha nalaphaya. Njengamanje, kuthiwa kunezindawo ezingaphezu kwe-3000 spa eJapan. Phakathi kwazo, kunezindawo eziningi ezidumile phakathi kwezivakashi zakwamanye amazwe. Kuvuliwe ...
12 Amathempeli AmaShayina amahle kakhulu nemijikelezo eJapan! I-Fushimi inari, i-Kiyomizudera, iTodaiji, njll.
Kunamakhemikhali amaningi namathempeli eJapan. Uma uya kulezo zindawo, nakanjani uzizwa uzolile futhi uvuseleleka. Kunamathengwa amahle namathempeli ongathanda ukuwathumela ku-Instagram yakho. Kuleli khasi, ake ngingenise amanye amathempeli athandwayo kakhulu namathempeli ku ...
Izikhathi zeJapan! Isiko elikhuliswe ekushintsheni kwezinkathi ezine zonyaka
Kukhona ushintsho olucacile lwesizini eJapan. Ihlobo lishisa kakhulu, kepha ukushisa akuhlali kuze kube phakade. Kancane kancane izinga lokushisa liwa futhi amaqabunga ezihlahleni aphenduke abomvu aphuzi. Ekugcineni, kuzofika ubusika obunzima. Abantu bamelana nokubanda futhi balinde ukufika kwentwasahlobo efudumele. Lokhu ...
Imininingwane © Best of Japan , 2022 Wonke Amalungelo Agodliwe.